नहूम 1 ERV-NE - निनवे शहरको - Bible Gateway
नहूम 1 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
परमप्रभु निनवे प्रति क्रोधित हुनुहुन्छ
2 परमप्रभु ईर्ष्यँलु र बद्ला लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले दोषीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ।
परमप्रभु एकदमै क्रोधित हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले उहाँका शत्रुहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ
र उनीहरूसँग एकदमै क्रोधित हुनुहुन्छ।
3 परमप्रभु धैर्यशील हुनुहुन्छ,
तर उहाँ अत्यन्तै शक्तिशाली पनि हुनुहुन्छ,
अनि उहाँले दोषीलाई दण्ड दिनुहुन्छ।
उहाँले तिनीहरूलाई भाग्न दिनुहुँदैन।
उहाँले आफ्नो शक्ति देखाउनको निम्ति भुवँरी,
र आँधिहरू ल्याउनु हुनेँछ।
मानिसहरू यो पृथ्वीमा माटोमाथि हिँड्छन्
तर परमप्रभु बादलमाथि हिंड्नुहुन्छ।
4 परमुप्रभु समुद्रहरूसित कर्कश शब्दमा बोल्नु हुन्छ
अनि त्यो समुद्र सुक्दछ।
सबै नदीहरू सुक्नेछन्।
बाशनर कर्मेलको हरियाली सुख्खाले मार्नेछ।
लबानेनको फूलहरू ओइलिनेछन्।
5 परमप्रभुको आगमन हुनेछ
अनि पहाडहरू डरले काम्नेछन्,
अनि पहाडहरू पग्लेर बग्नेछन्।
परप्रभुको आगमन हुनेछ
र पृथ्वी डरले काम्नेछ।
यो संसार अनि यसमा रहने सबै
6 परमप्रभुको भयानक रिसको अघि कोही पनि उभिन सक्तैन।
कसैले पनि परमप्रभुको भयानक रिस सहन सक्तैन।
उहाँको क्रोध आगो झैं हुन्छ।
जब उहाँ आउनुहुन्छ तब चट्टानहरू पनि टुक्रा-टुक्रा हुन्छन्।
7 परमप्रभु असल हुनुहुन्छ!
उहाँ कष्टको समयमा सुरक्षित स्थान हुनुहुन्छ।
उहाँमाथि भरोसा गर्नेहरूको उहाँले हेरचाह गर्नु हुन्छ।
8 तर उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई पुरै नष्ट पार्नु हुन्छ।
उहाँले शत्रुहरूलाई बाढीको पानीले बगाए जस्तै बगाउनु हुन्छ।
अँध्यारोको बिचमा पनि उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई लखेट्नु हुन्छ।
9 के तिमीले परमप्रभुको बिरूद्धमा षड्यन्त्र रच्दैछौ?
परमप्रभुले तिमीलाई समाप्त पारिदिनु हुनेछ
अनि अरू धेरै कष्ट पैदा गर्न सक्षम हुने छैनौ।
10 भाँडा भित्र अड्किएर जलिरहेको काँडाहरू जस्तै,
तिमीहरू ध्वंश हुनेछौ।
सुकेको बल्ने घाँसहरू जस्तै
तिमी झट्टै नष्ट हुनेछौ।
11 हे अश्शूर! एउटा मानिस तिमीहरूबाट आएकोछ।
त्यसले परमप्रभुको बिरूद्धमा षड्यन्त्र रचेकोछ,
अनि खराब सल्लाह दिएकोछ।
12 परमप्रभुले यहूदासँग भन्नु हुन्छ,
“अश्शूरका मानिसहरू अत्यन्तै शक्तिशाली छन्।
तिनीहरूका सैनिकहरू अनगन्ती छन्,
तर तिनीहरू काटिनेछन् अनि फ्याँकिने छन्।
प्रत्तेकलाई शेष गरिनेछ।
हे मेरा मानिसहरू! मैले तिमीहरूलाई धेरै कष्टहरू दिएँ,
तर अब म तिमीहरूलाई अरू बेशी कष्ट पैदा गर्नेछैन।
13 म अब तिमीहरूलाई अश्शूरको शक्तिबाट मुक्त गर्नेछु।
म अब तिमीहरूको गर्दनबाट त्यो जुवा फुकालि दिनेछु।
त्यसलाई म चक्कानाचुर पार्नेछु।
जुन साङ्गलाले तिमीहरू बाँधिएका छौ त्यसलाई टुक्रायाउँनेछु।”
14 हे अश्शूरको राजा! तिम्रो सम्बन्धमा परमप्रभुले यो आज्ञा दिनुभएकोछ,
तिम्रो नाउँ राख्नलाई तिम्रो कुनै सन्तान रहनेछैन।
तिम्रो खोपेको अनि धातुले बनाएको मुर्ति,
जुन तिम्रो देवताको मन्दिरमा राखिएको छन्,
म ती सबै ध्वंश पार्नेछु।
म तिम्रा निम्ति चिहान बनाउँदैछु,
किनकि तिम्रो अन्तिम क्षण आउँदैछ।
15 हेर यहूदा!
पहाडमाथिबाट त्यहाँ कोही आउँदैछ। हेर, कसैले सुसमचार लिएर आउँदैछ।
हेर, त्यले भन्दैछ, “त्यहाँ शान्ति छ।”
यहूदा तिमी आफ्नो बिशेष भोज मनाऊ।
यहूदा तिमी आफ्नो भाकल पुरा गर।
फेरि दुष्टटले तिमीमाथि आक्रमण गर्नेछैनन्।
ती सबै दुष्टहरू ध्वंश पारिनेछन्।